Umatshini weplastiki wePlastiki yeWelding, i-ultrasonic yeplastiki yeWelding yokuBopha
I-ultrasonic welding yeplastiki yindlela yobuchwephesha apho i-high-frequency ultrasonic acoustic vibrations isetyenziswe ekuhlaleni kwizinto zokubamba ezigcinwe kunye phantsi koxinzelelo lokwenza i-weld-state weld. Ihlala isetyenziselwa iiplastiki kunye nesinyithi, ngakumbi ukujoyina izinto ezingafaniyo. Kwi-welding ye-ultrasonic, akukho ziibholiti ezixhamlayo, izipikili, izinto ze-soldering, okanye i-adhesives eziyimfuneko ukubopha izinto kunye. Xa usetyenziswa kwisinyithi, into ephawuleka ngale ndlela kukuba iqondo lobushushu lihlala lingaphantsi komgangatho wokunyibilika kwezixhobo ezichaphazelekayo oko kuthintela naziphi na iipropathi ezingafunekiyo ezinokuvela kubushushu obuphezulu bezinto.
iindidi Teknoloji tags Thenga i-welder yeplastiki ye-ultrasonic, i-welder yeplasitiki e-ultrasonic, I-welder yeplastiki ye-ultrasonic iyathengiswa, Ixabiso leplastikhi yeplastiki ye-ultrasonic, I-welding yeplastiki ye-ultrasonic, Isixhobo seWelding seWelding seplastiki, Umatshini weplastikhi wase-US, Umatshini weplastikhi wase-US uyathengiswa, Ixabiso leplastikhi yaseMelika, I-Welding yeplastikhi yase-US, I-Welder yase-US yeplastiki Post yokukhangela